Intee in le'eg ayaa laga soo saaraa khadka tooska ah ee 60 ilbiriqsiyo? | Martech Zone
Waxaa laga yaabaa inaad dareentay xoogaa nacas ah qoraalkaygii ugu dambeeyay. In kasta oo daabacaadda maalin kasta ay noqotay qayb ka mid ah DNA-kayga sannadihii la soo dhaafay, sidoo kale waxaan ku xujeysanahay horumarinta bogga oo aan siiyaa sifooyin badan Shalay, tusaale ahaan, waxaan sii waday mashruuc lagu dhexgalinayo talooyinka ku saabsan warqadda cad ee goobta. Waa mashruuc aan xarigga ka jaray sanad ka hor sidaa darteedna aan u qaatay waqtigayga qorista oo aan u beddelay waqti koodh.
Ma ii xiisay? Inta badan ma ahan not waxaa jira tanno ilo ah oo halkaas ka jira oo lagu daabacayo waxyaabo la yaab leh. Kuma jiro wax dhalanteed ah oo ah inaan u istaago sida ugu fiican - Waxaan si fudud u jeclahay wadaagista waxyaabaha aan ogaaday iyo ka caawinta waxbarida kuwa idinka mid ah ee iska diiwaangaliyay oo raacaya balooggeyga si aan u sii wado inaan idin siinayo aragti ku saabsan aaladaha iyo macluumaadka internetka ee aan ogaado, cilmi baaris , oo wax ka baro.
Taasi waxay tiri, mugga buuqa la soo saaray ayaa si fudud dhagaha u furaya… mana sii fiicnaanayo. Dadku at Moz waxay ku sameysay falanqeyn nuxur leh BuzzSumo oo la helay:
Inta badan qoraallada la xiriira ganacsiga la daabacay waxay helayaan saamiyo yar iyo xitaa xiriirinno yar, inta badan wax ka yar 2 isdhexgalka Facebook.
In ka badan nus dhammaantood ganacsiga tweets la xiriira lahaa 11 ama ka yar saamiyada. Waan hubaa in qaar ka mid ah tan ay ugu wacan tahay dabeecadaha adeegsadayaasha Twitter-ka, laakiin waxay weli tilmaamaysaa dadaal aan shirkadaha soo celin.
In ka badan 75% ee boosteejooyinka ganacsiga ayaa lahaa eber xiriiriyeyaal dibadeed markaa haddii ujeedadu qabsaneysay raadinta dabiiciga ah businesses inta badan ganacsiyada ayaa si xun ugu fashilmaya helitaanka taraafikada dabiiciga ah.
85% qoraalka qoran wuxuu kayaryahay 1,000 erey inkasta oo in ka badan 1,000 erey si joogto ah u helaya saamiyo badan iyo xiriiriyeyaal.
Dacwadda Mawduuc Yar
Horraantii sanadkan, waxaan bilownay istiraatiijiyad khadka tooska ah loogu talagalay a xakamaynta daacuunka shirkadda halkan Indianapolis. Istaraatiijiyaddoodii hore waxay ahayd waqti hore oo duug ah oo meela badan leh kumanaan bogag gudaha ah, oo hodan ku ah keyword. Waxay ahayd mashiin kooban oo socday muddo bilo ah si uu isugu dayo inuu khiyaaneeyo algorithms… mana uusan shaqeyn. Boggu wuxuu ku booday qiimeynta ka dibna wuxuu ku dhacay meel macno ahaan laga heli karo tusmada.
Waxaan falanqeynay dhammaan shirkadaha gobolka iyo wixii ku lug leh waxyaabaha ay ku soo saaraan khadka tooska ah si loo gaaro qiimeyn ka sareysa macmiilkeena cusub. Waxaan si daacadnimo ah uga helnay tan waxyaabo ka kooban halkaas - laakiin aad u yar oo bogag cajiib ah ama faahfaahsan leh. Halkii aan ku dari lahayn buuqa, waxaan ku sameynay cilmi baaris hal mowduuc markiiba isla markaana waxaan soo saarnay maktabad ka kooban cayayaanka taasi waxaa lagu qoray qosol, waxaa ku jiray tanno muuqaal ah, waxaanan bilawnay inaan soo saarno faahfaahin iyo liis hubin loogu talagalay goobta.
Natiijadu waxay tahay, bilo gudahood, degelku wuxuu xukumaa qiimeynta. Waxay ahayd shaqo aad u adag oo nuxurkeedu ahaa mid waqti badan qaatay iyo mid qaali ah… laakiin natiijada ayaa noqotay inay shaqaysay. In ka yar nuxurka ayaa soo saari kara ka weyn natiijooyinka ganacsiga marka dadaalka la geliyo.
Markaad eegto muuqaalkan oo aad aragto isbeddellada ku saabsan abuurista hal daqiiqo gudahood shabakadda sannadihii la soo dhaafay, waxaa jira fursad aan caadi aheyn. Soo saar nuxur cajiib ah iyo kanaga nuxurka ayaa noqon doona boqorka ka mid ah pawns.
'60 ilbiriqsi 'infographic-keena ah ayaa muujinaya wixii ka dhacaya hal daqiiqo oo keliya shabakadda. Tirada raadinta Google, farriimaha Facebook iyo farriimaha WhatsApp ee lagu diro 60 ilbidhiqsi oo keliya ayaa runtii cajiib ah! Markii ugu horreysay ee la daabacay sanadkii hore, hadda waxaan u cusbooneysiinnay 2017, oo muujinaya tirakoobkii saddexdii sano ee la soo dhaafay. Robert Allen, Smart Insights.
Maxaa daqiiqad gudaheed khadka tooska ah uga dhaca?
Tags: 20142015201660 ilbiriqsiwaxyaabaha la abuurayisbeddellada ku jiramugga emaylka sanadkiibaemailsemayllada ayaa lagu diray hal daqiiqoFacebookfarriimaha facebookraadinta google daqiiqadiisaacadood oo ka koobaninfographicinstagram daqiiqadiiLinkedInfariimaha la dirayhal daqiiqoqoraallo la daabacaywarbaahinta bulshadastatswadarta emailada la dirayTweets daqiiqadiiTwittersoo wareejiyayWhatsApperay tirintaqoraalada wordpressyoutube